မာယာနံပါတ်များ ၁ မှ ၁၀၀၀ အထိစာရင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများ
မာယာများသည် Mesoamerica နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး၌အကြီးဆုံးနှင့်အတိုးတက်ဆုံးယဉ်ကျေးမှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ မာယာယဉ်ကျေးမှုသည် Yucatan ကျွန်းဆွယ်၊ မက္ကဆီကိုနှင့်ဂွါတီမာလာဒေသအချို့၌တည်တံ့သည်။ မာယာလူမျိုးများအားအဆွဲဆောင်ဆုံးသောရှုထောင့်တစ်ခုမှာ၎င်းတို့သည်နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ကျွမ်းကျင်မှု ရှိ၍ အခြားလူမျိုးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတော်လေးအဆင့်မြင့်သည်မှာသေချာသည်။ အလွန်ပြည့်စုံသောနံပါတ်စနစ်ဖြစ်သည်မရ။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်မည် မာယာဂဏန်းများ ပြီးတော့အခြေခံတွေကိုသင်ယူနိုင်တယ်။
အမှီအခိုကင်းသောစနစ်ဖြစ်သော်လည်းမာယာဂဏန်းစနစ်သည်အလွန်ပြည့်စုံပြီးဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်သောကြောင့်အာရုံစိုက်မှုများစွာရခဲ့သည်။ ဤယဉ်ကျေးမှုသည်ရှင်းလင်းသောအယူအဆရှိခဲ့သည် သုညဟိန္ဒူဘာသာဝင်တို့ကသူတို့အားပြသသည်အထိဥရောပသားများမရှိကြပေ။
1.1 ၂ မှ ၁၀ အထိ
1.2 ၂ မှ ၁၀ အထိ
1.3 ၂ မှ ၁၀ အထိ
4.1 မာယာ“ ဦး ခေါင်း” နံပါတ်တပ်စနစ်
ထို့နောက်ငါတို့သည်မာယာဂဏန်းများအားလုံးကို ၁ မှ ၁၀၀၀ အထိစာရင်းပြုလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့ကိုပိုမိုနက်နက်နဲနဲလေ့လာနိုင်ရန်သင်၏ကွန်ပျူတာ၊ မိုဘိုင်းလ်နှင့်ပုံနှိပ်ရန်ပုံများစွာရှိသည်။
၂ မှ ၁၀ အထိ
ဒီစာရင်းကမင်းအတွက်အသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့ငါတို့မျှော်လင့်တယ် PDF ဗားရှင်းဖြင့်ဒီမှာနှိပ်ပါမရ။ သင့်တွင်နံပါတ်များရှိသည့်မေးခွန်းများရှိပါကဤဆောင်းပါး၏အဆုံး၌မှတ်ချက်တစ်ခုထားခဲ့နိုင်ပါသည်။
၎င်းကိုအထူးကုများကစဉ်းစားသည် မာယာအရေးအသားစနစ်သည်အရုပ်သင်္ကေတဖြစ်သည်၎င်းသည်ရှေးအီဂျစ်နိုင်ငံတွင်အသုံးပြုခဲ့သောစနစ်နှင့်ဆင်တူသောအရာတစ်ခုရှိသည်။ သူ၏အရေးအသားသည်စာသားသင်္ကေတများနှင့်အသံထွက်သင်္ကေတများပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့်၎င်းအကြောင်းအရာကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတော်လေးခက်ခဲသည်။
မာယာဂဏန်းသင်္ကေတစနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားစရာအသေးစိတ်မှာ၎င်းတို့သည်အချိန်ကိုတိုင်းတာရန်နှင့်သင်္ချာတွက်ချက်မှုများပြုလုပ်ရန်တီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်, မာယာနံပါတ်များသည်နေ့များ၊ လများနှင့်နှစ်များကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုရှိသည်ထို့ကြောင့်မာယာပြက္ခဒိန်သည်သူ၏အကျော်ကြားဆုံးလက်ရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်အပြည့်စုံဆုံးနှင့်တိကျမှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိုနည်းတူမာယာ၏ဂဏန်းနှင့်သင်္ချာစနစ်သည်ပထမဆုံးသောတည်နေရာစနစ်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဂဏန်း (သို့) ဂဏန်းတစ်လုံး၏တန်ဖိုးသည်၎င်း၏ရပ်တည်ချက်ပေါ်မူတည်သည်။ ဒါကိုငါအောက်မှာအသေးစိတ်ရှင်းပြမယ်။
မာယာနံပါတ်များကိုနားလည်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ အကြောင်းမှာတစ်ခုတည်းသာရှိသည် သင်္ကေတသုံးခု၎င်းတို့အားပေးထားသောအသုံးပြုမှုပေါ် မူတည်၍ ပုံစံများကွဲပြားနိုင်သည်။ အချို့နံပါတ်များသည် codices အတွက်၊ အချို့ကအထိမ်းအမှတ်အတွက်နှင့်အချို့ကလူသားကိုယ်စားပြုမှုများပင်ရှိသည်။
မာယာဂဏန်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သောအခြေခံသင်္ကေတသုံးခုမှာ - အချက်တစ်ခု (1), လိုင်းတစ်ခု (5) နှင့် ခရု / အစေ့ / အခွံ (0) ။
ဤသင်္ကေတသုံးခုကိုပေါင်းခြင်းအားဖြင့်မာယာဂဏန်းများကို ၀ မှ ၂၀ အထိရနိုင်သည်။ ဤမှ စ၍ မာယာဂဏန်းတွက်ရာတွင်သတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ ပမာဏကို ၂၀ ဖြင့် ၂၀ သို့အုပ်စုခွဲသည်.
၂၁ မှ စ၍ မာယာဂဏန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ ဤနေရာ၌သင်ဤအရာကိုတန်ဖိုးထားနိုင်သည် တည်နေရာစနစ် မာယာလူမျိုးများ၏နံပါတ် (သို့) ကိန်းဂဏန်းတစ်ခု၏တန်ဖိုးသည်၎င်းတွေ့ရှိသောအနေအထားပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။
အောက်ခြေတွင်ဂဏန်းများ (၀ မှ ၂၀ အထိ) ရှိနေစဉ်၊ အထက်အဆင့်တွင်ဂဏန်းများသည် ၂၀ နှင့်မြှောက်သောဂဏန်းတန်ဖိုးဖြစ်သည်.
ဥပမာအားဖြင့်၊ ၂၅ ဂဏန်းတွင်အောက်ပိုင်း၌ ၅ (၅ နှင့်ညီသောမျဉ်း)၊ အထက်ပိုင်းသည် ၂၀ နှင့်ညီမျှသည် (အမှတ်သည် ၁ နှင့်ညီသော်လည်းအထက်ပိုင်း၌မြှောက်ထားသည်။ ၂၀) ။
အကယ်၍ ပုံတွင်တတိယအဆင့်ရှိသည် တတိယအဆင့်တွင်ရှိသောကိန်းဂဏန်းကို ၄၀၀ ဖြင့်မြှောက်ပါလိမ့်မည် (၂၀ x ၂၀) ပေ။ စတုတ္ထအဆင့်ကိုသုံးတဲ့အခါ စတုတ္ထအဆင့်၌ရှိသောကိန်းဂဏန်းကို ၈၀၀၀ ဖြင့်မြှောက်လိမ့်မည် (၂၀ x ၂၀ x ၂၀) ။
ငါစောစောကပြောခဲ့သလိုဘဲ၊ မာယာနံပါတ်တပ်စနစ်ကပညာရှင်တွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုစွဲဆောင်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲကတစ်ခုကအဲဒါတွေကိုရာနဲ့ချီပြီးဖန်တီးခဲ့တာလို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ကသုတေသနတွေအရဖော်ထုတ်ပြကတည်းက၊ ဘီစီနှစ်များ၏အခြားတစ်ဖက်တွင်၎င်းသည်ဖြစ်ခြင်းကိုထင်ရှားစေသည် "ဘာမျှမ" သို့မဟုတ် "သုည" ဟူသောအယူအဆရှိသည့်အမေရိကန်တိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးတွင်ပထမဆုံးသောယဉ်ကျေးမှု.
ပထမတစ်ချက်မှာငါတို့တွေးထင်တာနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်၊ မာယာလူမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့သင်္ချာတွက်ချက်မှုတွေကိုလုပ်ဆောင်ဖို့တီထွင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် သူတို့ကအချိန်ကိုတိုင်းတာဖို့သုံးကြတယ်မရ။ ဒါကိုရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်အချိန်ကိုတိုင်းတာတဲ့အပိုင်းနဲ့အပိုင်းတွေကိုအပိုင်းပိုင်းခွဲဖို့ညွှန်ပြတာကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကအခြားအရာတွေကိုပြောပြဖို့လည်းအဲဒါကိုသုံးခဲ့တယ်။
မာယာ၏ vigesimal system ကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်အမှန်ကန်ဆုံးသောစနစ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။မရ။ ဒီလိုပဲအဲဒါကိုယုံကြည်တယ် မာယာပြက္ခဒိန်သည် Gregorian ပြက္ခဒိန်ထက်ပိုတိကျသည် ၎င်းသည်ခေတ်သစ်တိုင်းတာခြင်းစနစ်များကဲ့သို့တူညီသောတိကျမှုရှိသည်။
သူတို့ရဲ့နံပါတ်စဉ်စနစ်ကိုအဓိကသုံးတာကအချိန်ကိုတိုင်းတာတာဘဲ၊ ကျေးဇူးကြောင့်သူတို့ကဂျီ ometric မေတြီ၊ နက္ခတ်ဗေဒင်နဲ့သင်္ချာပညာတွေမှာအများကြီးတိုးတက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်။
ဂျီသြမေတြီနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းကိုသိသည် မာယာများသည်တြိဂံ၊ စတုရန်း၊ စတုဂံပုံ၊ စက်ဝိုင်းနှင့်လုံးပတ်တို့၏သဘောတရားနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ရှင်းလင်းသည်ဒါ့အပြင်သူတို့ကထောင့်တွေကိုတိုင်းတာနိုင်တယ်။ ၎င်းတို့သည်တိုင်းတာရန်နှင့်၎င်းတို့အဆင်ပြေစေရန်သုံးနိုင်သောစွမ်းရည် ရှိ၍ ဂျီ ometric မေတြီကိန်းဂဏန်းများနှင့်ဂျီ ometric မေတြီအတွဲများကိုသူတို့သိသည်။
မာယာ“ ဦး ခေါင်း” နံပါတ်တပ်စနစ်
သူတို့သုံးသောဤအခြားနံပါတ်စနစ်သည်အလွန်ထူးခြားသောဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်နံပါတ်များကိုကိုယ်စားပြုရန်ကွဲပြားသောနတ်ဘုရားများ၏ခေါင်းများကိုသုံးသောကြောင့်၎င်းကိုလူသိများသည်။ ခေါင်းနံပါတ်စနစ်မရ။ ၎င်းသည် vigesimal system တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်း၏အဓိကနံပါတ်မှာ ၂၀ ဖြစ်သည်။
ဒီနံပါတ်စနစ်ထဲမှာ ကိုယ်စားပြုနိုင်သည့်အမြင့်ဆုံးသောနတ်ဘုရားအရေအတွက်မှာ ၁၄ ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည် ၀ မှ ၁၃ အထိဂဏန်းများကိုလုံလုံလောက်လောက်ပေးနိုင်သည်။ ပျောက်ဆုံးနေသောဂဏန်း ၆ လုံးမှ ၁၉ အထိသင်ဘာလုပ်ခဲ့သနည်း။ သူတို့ကနတ်ဘုရားတွေရဲ့မေးစေ့ရဲ့အောက်ပိုင်းမှာမာယာဂဏန်း ၁၀ လုံးကို ၄ ကနေ ၉ အထိကိုယ်စားပြုပါတယ်။
သံသယဖြစ်စရာမလိုဘဲ၎င်းသည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီးအလွန်ပြည့်စုံသောစနစ်ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုမာယာအသိုင်းအဝိုင်းများစွာတွင်အသုံးမပြုခဲ့ဘဲအများစုသည်အမှတ်များ၊ အစင်းများနှင့်ခရုများကိုသုံးခဲ့သည်။
မာယာလူမျိုးများသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အထင်ရှားဆုံးနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောယဉ်ကျေးမှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အချိန်များအတွက်နည်းလမ်းများစွာဖြင့်အတိုးတက်ဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ သင်္ချာ၊ ၎င်း၏နံပါတ်စဉ်စနစ်၊ ပြက္ခဒိန်၊ ဗိသုကာပညာ၊ စကြဝာအကြောင်းဗဟုသုတစသည်တို့သည်တိုးတက်လာသည်၊ ဤအရာအများစုသည်အခြားခေတ်ပြိုင်ယဉ်ကျေးမှုများထက်သာလွန်သည်။
ကျွမ်းကျင်သူများကမာယာလူမျိုးများ၏ယဉ်ကျေးမှုပျောက်ကွယ်မှုသည်အရာနှစ်ခုကြားတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် ၈ နှင့် ၉ ရာစု ငါတို့ခေတ်၊ အဲဒါကဘာလဲ လူသားတို့၏သမိုင်းတွင်အကြီးမားဆုံးသောလျှို့ဝှက်ချက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်မရ။ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်နည်းပညာတိုးတက်မှုများဖြင့်ကြီးမားသောမြို့ကြီးများဖြစ်လာသော Mayan မြို့ကြီးများကိုတဖြည်းဖြည်းစွန့်ခွာရခြင်း၏အကြောင်းရင်းကိုယနေ့ထိမသိရှိရသေးပါ။ သမိုင်းပညာရှင်များသည်သူ၏ပျောက်ဆုံးမှုအတွက်သဲလွန်စများကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေကြသည်။
လက်ရှိတွင်မာယာမြို့များကိုစွန့်ခွာခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောယူဆချက်အချို့မှာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၊ အင်အားကြီးအင်ပါယာများကတိုက်ခိုက်ခြင်း (သို့) အရင်းအမြစ်များလျော့နည်းလာခြင်းတို့ကြောင့်မြေ with ဇာပိုကောင်းသောမြေများသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရန်တွန်းအားပေးသည်။ သို့သော်ဤသီအိုရီများကိုမည်သူမျှသက်သေမပြနိုင်ပါ။
ဒါပေမယ့် ဒီပြိုလဲမှုကမာယာနံပါတ်စဉ်စနစ်၊ သူတို့ရဲ့ပြက္ခဒိန်နဲ့သူတို့လုပ်ခဲ့သမျှတိုးတက်မှုအားလုံးအတွက်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ ဤအသိပညာအားလုံးသည်ခေတ်ပြိုင်ဥရောပနှင့်ကမ္ဘာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
၁၆ ရာစုတွင်စပိန်လူမျိုးများYucatánသို့ရောက်ရှိလာသောအခါမာယာတို့၏ယဉ်ကျေးမှုပြိုကွဲမှုသည်လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်များစွာကဖြစ်ပွားခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်စပိန်၏ကျန် Mayan ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အခြားအဆက်အသွယ်သည် Aztecs များနှင့်အခြားယဉ်ကျေးမှုများကဲ့သို့အရေးမကြီးပါ။ ကြီးမားတဲ့အဆောက်အ ဦး တွေကိုထိန်းသိမ်းထားတုန်းဘဲ။
မာယာလူမျိုးများ၏သင်္ချာအမွေအနှစ်ကိုတူညီသောပထဝီအာကာသထဲတွင်အခြေချနေထိုင်သောလူများကစုဆောင်းခဲ့သည် Aztec သင်္ချာစနစ်သည် Mayan စနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားမှုများစွာရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်အထူးသဖြင့် Aztecs တို့ထက်သိသိသာသာအသုံး ၀ င်မှုအတွက်ထင်ရှားခဲ့သည်။
Aztec ယဉ်ကျေးမှုအဆုံးသတ်ခြင်းနှင့် Mesoamerica ၏အခြားကြီးကျယ်သောယဉ်ကျေးမှုများနှင့်အတူမာယာယဉ်ကျေးမှု၏လက်ကျန်များသည်သမိုင်းတွင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ လေ့လာရန်ကျန်ရှိနေသေးသောကျွန်ုပ်တို့၏အသိပညာများသည်အလွန်ရှားပါးပြီးအလွန်အဖိုးတန်သည်။မရ။ မာယာအသိပညာလက်ကျန်များထဲတွင် Dresden Codex သည်ပြက္ခဒိန်နှင့်၎င်း၏နံပါတ်စဉ်စနစ်အတွက်ရည်စူးထားသောအပိုင်းအားလုံးပါ ၀ င်သောအမေရိကတိုက်အားလုံး၌ရှေးအကျဆုံးစာအုပ်ဖြစ်သည်။
0 မေးခွန်း ၁၀ ခုပြီးသည်
နောက်တစ်ခု၊ ငါတို့ကမင်းရဲ့မာယာဂဏန်းတွေကိုမင်းသိဖို့စမ်းသပ်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ခန်းအနည်းငယ်ကိုမင်းပြင်ဆင်ပြီးပြီ။ ဆောင်းပါးတစ်လျှောက်လုံးငါတို့သင်ယူခဲ့ရတဲ့အရာကိုပြန်သုံးသပ်နိုင်တယ်၊ အရေးကြီးတာကမင်းအခြေခံတွေ၊ အခြေခံတွေကိုဆက်ထိန်းထားဖို့ပါပဲ၊ ကံကောင်းလိုက်တာ။
မင်းရပြီ0de0ဖြစ်နိုင်သောအချက်များ0)
မေးခွန်း 1 de 10
ဂဏန်း ၅ ကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုစာလုံးပေါင်းသလဲ။
မေးခွန်း2de 10
မင်း ၁၄၂ ကိုဘယ်လိုစာလုံးပေါင်းလဲ။
မေးခွန်း3de 10
မေးခွန်း4de 10
ငါဘယ်လိုသိလဲ အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပါ အောက်ပါဝါကျ:“ ငါ့အဖေ Vicente အသက် ၄၈ နှစ်”
မွန် ami Vicenteasoixante-huit ans
မေးခွန်း5de 10
၃ + ၈ ...
မေးခွန်း6de 10
မေးခွန်း7de 10
မေးခွန်း 8 de 10
မင်းဒီ page ကိုကြိုက်ခဲ့လား။
မေးခွန်း9de 10
မေးခွန်း 10 de 10
Deux plus trois font ...
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း » ယဉျကြေးမှု » မာယာဂဏန်း ၁ မှ ၁၀၀၀
အီဂျစ်နံပါတ်များမှ ၁ မှ ၁၀၀ အထိ
"မာယာဂဏန်း ၁ မှ ၁၀၀၀ အထိ" မှတ်ချက် ၅ ချက်
2:2018 pm မှာအောက်တိုဘာလ 1, 26
8:2018 pm မှာနိုဝင်ဘာလ 12, 56
11:2018 pm မှာနိုဝင်ဘာလ 4, 01
24:2019 pm မှာဖေဖော်ဝါရီလ 5, 30
အတန်းထဲမှာငါ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အတွက်မာယာဂဏန်း ၄၃၇၉၃ ၄၀၁ ၂၃၄၈ နဲ့ ၇၁၆ ကိုငါလိုအပ်တယ်
10:2019 pm မှာအောက်တိုဘာလ 1, 59
ငါတကယ်သံသယရှိတယ်။ ၂၀၁၆ ထက်ဒီနှစ်ကရက်စွဲတစ်ခုဘယ်လိုရေးရမလဲသိချင်ပါတယ်